Meeqo Musharixiinta ayaa is diiwaan gelisay? - BAARGAAL.NET
doorashada soomaaliya farmaajo
Meeqo Musharixiinta ayaa is diiwaan gelisay?
✔ Admin on January 28, 2017
Madaxweynaha Soomaaliya ee uu wakhtigiisu dhammaaday Xasan Sheekh Maxamuud ahna musharax u taagan qabashada xilka Madaxeyne ee Soomaaliya ayaa goordhow is diiwaangaliyay
Madaxweyne Xasan Sheekh oo ay wehlinayaan Xubno dhowr ah oo ka tirsan Madaxtooyada Soomaaliya, ayaa Guddiga doorashooyinka ku wareejiyay lacagta is diiwaangalinta oo dhan 30,000 oo Dollar, sida uu Guddiga sheegay.
Madaxweyne Xasan ayaa is diiwaangalintiisa kadib lasiiyay Shahaadada Caddaynta Murashaxnimo oo ay bixinayeen Guddiga doorashada.
Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa noqonaya Musharaxii 12-aad ee maanta isdiiwaan geliya, waxaana ka horeeyay 11 Musharax oo iyaguna maanta is diiwaangaliyay.
Guddiga Doorashadda Madaxweynaha u qaabilsan Diiwaangelinta Murashixiinta ayaa hubiyey inay Murashixiinta mid kasta bixiyey Lacagaha is diiwaan gelinta oo dhan 30,000 oo Dollar, ka hor inta aan la wada siinin Shahaadada Caddaynta Murashaxnimo.
Dhinaca kale, Guddiga doorashooyinka ayaa sheegay in Jadwalka is diiwaangalinta uu ku socdo sida loogu tallo galay, waxa uuna guddiga sheegay inaan wakhti lagu dari doonin maalmaha loo qabtay Musharaxiinta inay isku diiwaangalinta.
HOOS KA AKHRISO LIISKA MUSHARAXIINTA IS DIIWAANGALISAY:
Cumar Cabdirashiid Cali Sharmarke.
Cabdiqaadir Cosoble Cali.
Maxamuud Axmed Nuur Tarsan.
C/naasir Cabdulle Maxamed.
Bashiir Raagge Shiiraar
Amb. Maxamed Cali Ameeriko